Osomabhizinisi bazimisele ukweseka ezokushushisa, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Izimakethe azisebenzi kahle uma lingekho ithemba ngokuphepha kwempahla nokwezinkontileka. Inkohlakalo ebulala lelo themba iwathwalisa kanzima amabhizinisi nomnotho.
Yingakho ngikholwa wukuthi wumqondo ophusile ukuthi osomabhizinisi beseke abaphathi bezokushushisa emizamweni yabo yokushushisa abathinteka ophenyweni lokugwamanda umbuso, ikakhulukazi olwenziwa yikhomishini kaZondo.
Kucacile ukuthi uPhiko lokuShushisa ezweni nabaphenyi bayahluleka ukuthola izinsizakusebenza ukuqinisekisa ukuthi bayaphumelela uma beshushisa. Kwakona loko kungenxa yokugwamanda umbuso, izinhlaka ezimqoka zomthetho zathuntubezwa, nokwakuyiqhinga lokuthi izigilamkhuba ziphunyuke.
Izibazi lezi esisele nazo kanti labo bethu abasemabhizinisini bazimisele ukusiza ngohlelo lokwelapha (isizwe) kuze kube sekugcineni.
Zimbili izindlela abantu bamabhizinisi abangalekelela ngazo. Okokuqala ngamakhono. Okwesibili ngemali. Sinabaphenyi, abacwaningi, abameli basemajajini, abameli nabanye abangeseka uphenyo nokushushisa. Kukhona futhi ezinye izindlela osomabhizinisi abangalekelela ngazo ngokuxhasa ngemali yokweseka ezokushushisa.
Kungikhuthazile engikuzwe kushiwo yiNhloko yezokuShusha u-Adv Shamila Batohi ePhalamende ngesonto elidlule. Uthe bacabanga ukuxoxisana nemboni ezimele ukuze bathole ezinye izinsizakusebenza ukweseka umsebenzi wabo.
Ngicabanga ukuthi osomabhizinisi bazimisele ukweseka ezokushushisa ngosizo eziludingayo. Kumqoka ukuthi kube nemibandela efanele yokuthi lolu sizo luzotholakala kanjani. Izinhlaka zethu ezilwa nobugebengu nezobulungisa ziyingxenye emqoka kahulumeni futhi kubalulekile ukuthi zihlale zizimele.
Izikhungo ezifanele, njengokusho koMthethosisekelo, yizona okumele zenze izinqumo ngabazoshushiswa (ngaphandle uma abantu bezishushisela bona ngokuzimela, nakho okungaba neqhaza).
Noma ngabe yiluphi usizo oluqhamuka embonini ezimele akufanele bese kuba wukuthi yiyo esizoshaya amaphiko. Siyazi-ke ukuthi inkohlakalo ayenziwanga ngababesebenzela uhulumeni kuphela kodwa nabasembonini ezimele kanti kumele kube nobulungisa ngaphandle kokwenzelela.
Kuzomele kube nendlela ecacile ezosetshenziswa ukubeka imibandela ezolawula lolu sizo. U-Adv Batohi uphakamise ukuthi enye indlela engasetshenziswa yi-trust.
Ngicabanga ukuthi yindlela engabhekwa lena uma kuzophathiswa ama-trustee afanele njengamajaji asethathe umhlalaphansi.
Ngikholwa wukuthi zikhona izindlela izinhlaka zomphakathi ezingahlangana ngayo ukuqinisekisa ukuthi bathathelwa izinyathelo zomthetho bonke abathintekayo ezinsolweni zokugwamanda umbuso nenkohlakalo yonke.
I-Business Leadership South Africa (I-BLSA) izimisele ukusebenzisana noPhiko lokuShushisa ezweni nezinye izinhlaka zokulwa nobugebengu ukuze kutholakale indlela efanele.
I-BLSA inomlando omuhle wokweseka ukulwa nobugebengu ngophiko lwayo iBusiness Against Crime.
Loku sekusize amaphoyisa nezinye izinhlaka ukuqinisekisa ukuthi ulwazi nezinsizakusebenza kwemboni ezimele kusetshenziswa kahle ukulwa nobugebengu.
Ngikubheke ngabomvu ukusebenzisana nabalingani bethu bezinye izinhlaka ukubheka izindlela esingabambisana ngazo ukuqinisekisa ukuthi kuba nobulungisa nokuvuselela ithemba emphakathini ukuthi umthetho uyasebenza eNingizimu Afrika.
Ukungabi bikho kwemfundo esezingeni eliphezulu eNingizimu Afrika yichilo elihlambalaza ukubusa kwentando yabantu. Imfundo yodwa ngeke izixazulule izinkinga. Imigomo emihle nokusetshenziswa kwayo ngezinye izinto ezidingekayo. Kepha ukuguqula izinga lemfundo yethu kungaxazulula inqwaba yezinkinga zethu, osekunesikhathi zikhona.
Nakuba iBLSA ikholwa wukuthi kuningi angakuthintanga uMengameli uCyril Ramaphosa eNkulumweni ayiBhekise esiZweni, siyakwamukela ukuzibophezela kwakhe ekusheshiseni ukuthi kushushiswe abathintekayo kumathenda eCOVID-19 nasemibikweni yeJaji uRaymond Zondo yokugwamanda umbuso. I-BLSA izibophezele ukweseka ezokushushiswa ngayo yonke indlela.